Trafikana harem-pirenena Vato 5 taonina indray no tratra tao Ihosy
Vato tsy misy taratasy ara-dalàna no tra-tehaky ny mpitandro filaminana, araka ny fampitam-baovaon’ny Polisim-pirenena Malagasy.
PSI Madagascar Vonona hiara-kiasa amin’ny Antenimierandoholona
Tonga nitsidika ny filohan’ny vaomiera sosialy, koltoraly ary serasera eo anivon’ny Antenimierandoholona Rakotozafy Jean Martin ny Talen’ny serasera avy amin’ny PSI Madagasikara (Population Service International – Madagascar) Rtoa Nathalie Randriamanga omaly, teny amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona Anosy.
Fanambaram-pananana Ireo teboka 10 tsara ho fantatra
Mazava ny voalazan`ny lalàmpanorenana fa miantoka ny fangaraharahana sy mangataka fangaraharahana ny fanaovana fanambaram-pananana. Izany dia ho fanatanterahana ny lalàna manan-kery mba hisorohana ny toe-javatra izay mety hitarika ahiahy mahakasika ny kolikoly, ary adidy nohefaina eo anatrehan’ny fanjakana Malagasy.
9 andro mialohan’ny fahatsiarovana ny datin’ny 29 martsa 1947 dia mbola mangingina hatreto ny fanomankomanana izany.
Namela vady sy kamboty telo mianadahy (roa vavy dia ray lahy). Manana maripahaizana Brevet élémentaire, Baccalauréat Sciences Expérimentales Licence en sciences économiques tao amin’ny oniversite Marbourg Lahn tany amin’ny Repoblika Federalin’i Alemaina. Toerana sy andraikitra maro no efa notazoniny teto amin’ny firenena. Efa solontena maharitra lefitra tany amin’ny Foiben’ny FAO tany Roma (1969-1971), mpanolotsaina teknika tao amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny (1973-1975), talen’ny kabinetra sivily tao amin’ny filohan’ny Repoblika Demokratika Malagasy (1973-1975), minisitry ny varotra (1982-1989), minisitry ny varotra sy ny Indostria (1989-1991), filohan’ny filankevi-pitantanan’ny JIRAMA (1997 PCA) ary nisehatra tamin’ny asa fandraharahana izy izao nodimandry izao. Tamin’izy nandranto fianarana tany ivelany no nahafantarany an’i Didier Ratsiraka, niaraka namolavola sy nanangana ny antoko AREMA ary nijoro ho mpikambana tao amin’ny « Comité Central » ny antoko izy ary mbola komity mpitantana ny AREMA misahana ny Faritanin’ Antsiranana izy lasa io.